Sivavanye ikhamera yokhuseleko yeReolink Argus 3 Pro | Ndisuka mac
Sivavanye ikhamera yokhuseleko yeReolink Argus 3 Pro
Ngexesha elidlulileyo besele sinethuba lokuvavanya ikhamera yokhuseleko yeReolink Argus 3 kwaye ngeli xesha sinenguqulo ehlaziyiweyo etafileni. Imodeli ekuthethwa ngayo yiReolink Argus 3 Pro, kwaye iPro iza ngezizathu ezininzi esiza kubonisa apha ngezantsi.
Eyokuqala kunye neyona ibalaseleyo onokuyibona kwibhokisi yile intsha I-Reolink Argus 3 Pro yongeza i-4MP kwi-khamera, enika imibala ebukhali ngokumangalisayo necacileyo kunye neenkcukacha zomfanekiso imini nobusuku kwi-HD 2K 2560 x 1440 umgangatho. umgangatho womfanekiso uphucula kakhulu ngokuthelekiswa nohlobo lwangaphambili.
Thenga apha iReolink Argus 3 Pro entsha
1 Umgangatho womfanekiso we-2K, abantu kunye nokufunyanwa kwesithuthi, umbono wasebusuku kunye nokunye
2 Inkxaso ye-band-Wi-Fi
3 Ibhetri enikwa amandla elanga
4 Ukufakwa okulula kunye nokumelana ne-iP65
Umgangatho womfanekiso we-2K, abantu kunye nokufunyanwa kwesithuthi, umbono wasebusuku kunye nokunye
Iimpawu eziphambili zekhamera entsha yeReolink ngokungathandabuzekiyo kukuphuculwa komgangatho womfanekiso. Ngoku ngolu tshintsho lutsha kulensi yekhamera kunokwenzeka ukusuka kwi-HD epheleleyo ye-1080p ukuya kwi-HD 2K (4MP). Oku kuthetha ukuba xa kuya kufuneka ubone imifanekiso kwisixhobo sakho, umgangatho uya kuba ngcono ngakumbi kunakwinguqulelo yangaphambili. Alithandabuzeki elokuba kwikhamera yokhuseleko eyi-1080p sinokwanela, kule meko siya kwelinye inyathelo.
Ukufunyanwa kwezinto okanye abantu yenye yeempawu ezintle zekhamera yeReolink. Iinketho zoqwalaselo zininzi kwaye kule meko Uyakwazi ukubona izinto Phambi kokuba basondele kakhulu Konke oku kunokuqwalaselwa kwi-Reolink app, efumaneka kwi-Mac, iOS kunye ne-Android.
Ngokumalunga nobusuku, ungamoyiki ngale khamera ukusukela yongeza umbono wasebusuku kunye neebhalbhu ezi-2 ezakhelweyo kwiArgus 3 Pro Owenza ubusuku obumnyama bungabi yingxaki. Ngale ndlela inzwa ilungile kwaye imifanekiso iboniswe kuhlobo lwangaphambili lweArgus kwaye le igqibelele.
Kule meko iArgus 3 Pro yongeza ukhetho lokudibanisa kwiibhendi ze-Wi-Fi ze-2,4 kunye ne-5 GHz ke ngekhe ubenengxaki zonxibelelwano nayo. Inyani yile yokuba ukuyidibanisa ekuqaleni kuhlala kungcono ukusebenzisa ii-band ze-2,4 kodwa kule meko singazisebenzisa zombini.
Siyasebenza ukuba siyayiqaphela loo nto Ibhendi ye5GHz inokuthi ingazinzi ngakumbi ngexesha loqhagamsheloUkongeza, kwezinye iimeko isibonisa umqondiso ophantsi kunye nokujonga imifanekiso kuyehla. Ngayiphi na imeko, ayilahlekanga ngokupheleleyo kwaye kuyinyani ukuba ikhamera ikude kwi-router kwaye oku kunokuba yimeko ekufuneka ithathelwe ingqalelo. I-router kufuneka ibe namandla, kodwa oku kufana nayo yonke into exhunywe kwi-Wi-Fi, exhomekeke kwi-router ngaphezu kweso sixhobo.
Fumana ikhamera yokhuseleko yeReolink Argus 3 apha
Ibhetri enikwa amandla elanga
Ukuba sithetha ngokuzimela le khamera yokhuseleko Ibambe ngokomenzi phakathi Iinyanga ezi-2 kunye ezi-6 emva kokuba kwenziwe intlawulo epheleleyo. Sinepaneli yelanga enikezela isigxina rhoqo kwaye ke ngekhe siqinisekise ukuzimela okukhulu oku kuthiwe nguReolink. Inyani yile yokuba kufanelekile ukuthenga i Iphaneli yeSolol kwakhona kuba isinika ukuzimela okungenamda kule khamera inomtsalane.
Ukutshaja ibhetri ngaphandle kwephaneli yelanga Udinga iadaptha yamandla ye5V / 2A engafakwanga ebhokisini, into eyongeziweyo yintambo ye-microUSB Ukusuka kwifemu ngokwayo bayacebisa ukuba kusetyenziswe iphaneli yokutshaja elanga kwaye yeyona ndlela ilungileyo yokuba ibhetri yeKhamera ingaze iphele. Akunyanzelekanga ukuba uthenge ipaneli yelanga ukuze usebenze ngokuchanekileyo kwekhamera.
Ukufakwa okulula kunye nokumelana ne-iP65
Ukufakwa kwekhamera yeReolink Argus 3 Pro kulula nje njengemodeli yangaphambili. Yongeza ukhetho lokwenza imingxunya eludongeni kwaye ubeke izikrufu kubakaki ukuze uhlengahlengise ikhamera ukuthanda kwethu okanye ukhetho lokusebenzisa iteyiphu ukuyibamba ngaphandle kwemingxunya yokomba. Ewe kunjalo, kufuneka sibe nomthi, isibane sesibane, ucingo okanye into efanayo ukuze sikwazi ukuwusebenzisa.
Ngayiphi na imeko kwaye Ukuthetha ngokobuqu ndiyathanda ukubamba ngokuqinileyo kwaye olona khetho luhlala luhamba ngezikrelemnqa eludongeni. Ngemingxuma emibini kwanele kwaye ikhamera iya kukhuseleka ngokwenene. Ukongeza, itemplate yongezwa ngokubekwa kwayo kwaye kulula kakhulu ukuyifaka. Konke oku kufakwe kwibhokisi ethunyelwe yinkampani yekhamera kwaye uya kubona ukuba ukufakela kulula kakhulu.
Ukuphuculwa komgangatho wevidiyo
Ufakelo olulula kunye nonxibelelwano olukhawulezayo
Umgangatho wexabiso elihle
Ngaba ayongezi ishaja eludongeni
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Sivavanye ikhamera yokhuseleko yeReolink Argus 3 Pro
ImacOS Monterey Beta yamvanje isifundisa indlela yamandla aphezulu kwiiMacBooks
Amaphepha, amanani kunye ne-Keynote zihlaziywa ngeempawu ezintsha zokusebenzisana